Sintomy ary apetraho amin'ny Android Nexus anao ny fitaovana 5.1 Androidsis
Android 5.1 Vita izany azon'ny tompon'ny fitaovana Nexus rehetra taorian'ny omaly Google dia nanambara ny fanombohany avy amin'ny bilaoginy manokana. Dika vaovao izay tonga miaraka amina fanamboarana bibikely marobe sy vaovao vitsivitsy momba ny inona ny Nexus 5 sy ny Nexus 6 ary ny hafahafa ho an'ny sisa amin'ny fitaovana Nexus, izay azontsika asongadina ny fidirana haingana amin'ireo fifandraisana toa ny Wi-Fi. Fi avy amin'ny fidirana haingana amin'ny bara fampandrenesana.
Fitaovana Nexus izay efa manana ny sarin'ny orinasa Android 5.1 Lollipop no tranainy indrindra, vaovao iray izay hahafaly ireo manana ny Nexus voalohany toa ny Nexus 7 2012, Nexus 10 na koa ny Nexus 5. Avy eo dia asehonay anao koa ny fomba fandefasana ny sary amin'ny orinasa mba hanananao ny kinova Android 5.1 Lollipop vaovao amin'ny Nexus ao anatin'ny fotoana fohy.
1 Android 5.1 Lollipop Factory Sary
2 Ahoana ny fametrahana ny sary an-tsarin'ny Android 5.1
2.1 fepetra takiana
2.2 Manokatra ny bootloader
2.3 Fametrahana Android 5.1 Lollipop
Android 5.1 Lollipop Factory Sary
Android 5.1 Lollipop kinova LMY47D dia azo alaina amin'ny Nexus 5, Nexus 7 2012 ary Nexus 10. Ity ny lisitra izay havaozinay Rehefa mivoaka ny sary hafa momba ny orinasa, toa ny Nexus 6 sy Nexus 9 vaovao sy vaovao.
Nexus 7 (Wifi 2013)
Ataovy ao an-tsaina fa mba hamelomana ny sary any amin'ny orinasa mila manana ny bootloader voahidy ianao.
Ahoana ny fametrahana ny sary an-tsarin'ny Android 5.1
Sintomy ny sarin'ny orinasa mety amin'ny fitaovanao, amin'ity tranga ity dia antsoina hoe LMY47D
Ampidino ny Mpamily USB Nexus
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony dia mila ianao alefaso ny bootloader
Solosaina misy Napetraka ny ADB
Ampandehano ny "debugging USB" ao amin'ny Settings> Safidin'ny developer. Raha te hiditra amin'ny safidin'ny mpamorona dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Settings> About ianao ary tsindrio im-7 amin'ny isa fananganana.
Raha na inona na inona antony tsy ekena ilay fitaovana Mila mandeha any amin'ny fitehirizana ianao, kitiho ny kisary misy teboka telo mitsivalana ary safidio ny fifandraisana USB amin'ny solosaina. Vonoy ny MTP ary safidio ny PTP.
Manokatra ny bootloader
Ny voalohany dia mametraka ADB avy amin'ity rohy
Misokatra CMD avy amin'ity toerana ity: C: \_ android-sdk \_ platform-fitaovana. Tsindrio ny sora-baventy ary miaraka amin'izay dia tsindrio havanana amin'ny habaka ao amin'ny fampirimana fitaovana-platform. Ny safidy "open window window here" dia hita ao amin'ny menio pop-up
Mihidy tanteraka ny fitaovana ary mifandray amin'ny PC amin'ny alàlan'ny USB
Avy amin'ny fikandrana baikon'ny baiko manorata "fitaovana adb" tsy misy teny nalaina. Hiseho ny isan'ny fitaovana ampifandraisina. Raha tsy izany dia safidio ny PTP amin'ny fifandraisana USB amin'ny solosaina hampifandray azy io indray ary zahao raha napetraka ny mpamily Nexus USB
Ny fitaovana dia mamerina ary miditra amin'ny maody bootloader
Araho ny torolàlana amin'ny efijery
Mandrosoa ny terminal ary kitiho ny baiko hanamboarana ADB sy Fastboot:
Mizaha amin'ny safidin'ny rafitra> fitendry - hitsin-dàlana, avy eo serivisy. Tadiavo ny safidin'ny terminal vaovao ao anaty fampirimana ary ampodino izany.
Ampifandraiso amin'ny Mac ny fitaovana Nexus amin'ny alalàn'ny USB
Esory ao anaty fampirimana ao amin'ny biraonao ny atin'ny sary. Tsindrio havanana amin'ny fampirimana ary safidio ny serivisy rehefa miseho ny menio, kitiho ny terminal vaovao ao amin'ilay fampirimana
Soraty manaraka eo am-baravarankely ny terminal mba hamerenanao ilay fitaovana amin'ny fomba bootloader:
Ity ambany ity raha hamaha:
Araho ny torolàlana momba ny fitaovana eo amin'ny fitaovana
Fametrahana Android 5.1 Lollipop
Amin'ny fanatanterahana ireo dingana ireo hamafana ny fitadidiana anaty rehetra izahay rehefa apetraka indray ny sarin'ny orinasa.
Ny atin'ny sary dia nalaina avy amin'ilay fampirimana fitaovana-sehatra ADB iray ihany izay nanokafantsika ny fikandrana baiko
Avy amin'ilay fampirimana iray ihany misokatra indray ny fikandrana baiko iray miaraka amin'ny fomba etsy ambony (shift + tsindrio havanana) na ny terminal amin'ny Mac
Soraty ny baiko:
Nanamboatra a famafana tanteraka ny fahatsiarovana anaty miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
fastboot mamafa ny boot
fastboot namafa velively ny cachefastboot hamafana ny fanarenana
fastboot hamafa mpampiasa
Napetraka ny rakitra sary izay efa navotsotra tao anaty fampirimana fitaovana-platform:
fastboot - fanavaozana sary-nakasi-lmy47d.zip
Ny mpampiasa Mac sy Linux dia tokony tsindrio havanana amin'ny fampirimana misy ny sarin'ny orinasa, mitete amin'ny serivisy ary kitiho ny terminal vaovao ao amin'ny folder ary kitiho ity baiko manaraka ity:
ankehitriny afaka minitra vitsy vao manomboka ary apetraho mba hanana Android 5.1 Lollipop amin'ny fitaovana Nexus anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Android 5.1 misy, misintona ary apetaho amin'ny fitaovana Nexus anao
Ireo an'ny Nexus 4 azontsika hadino ve ny mahazo vaovao farany? O_o
Ho tonga amin'ny Nexus 4 izy, miandry kely! Nanavao ny lisitra aho mba hisorohana ny fikorontanana
Mazava ho azy, raha ny nexus 5 no taloha ... Ny 4 dia efa ... Nexus IV (amin'ny isa romana)